Af-Soomaaliga iyo Warfaafinta Maanta | maktabadda | Af-Soomaaliga
Category Archives: Af-Soomaaliga iyo Warfaafinta Maanta
14/08/2017 Af-Soomaaliga iyo Warfaafinta MaantaAxmed F. Cali "Idaajaa"maamule
1. Beel: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Laba beelood ayaa meel hebla shalay dagaal ku dhex-maray.” Maalmo ka dib ayaan haddana maqlaa, iyada oo uu weriyuhu leeyahay: “Laba beelood oo walaalo ah ayaa ku diriray meel hebla,” isaga oo mooggaan u jeeda kuwii maalintii hore dagaallamay lafo ka mid ah!
2. Magac-darid: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Haddana, waa xubintii aannu ugu magac-darnay sidaas iyo sidaas.” Ama iidheh dhegeysatada loola jeedo, laguna leeyahay: “Xaafad hebla waxaa laga furay makhaayad aad u wanaagsan, taas oo loogu magac-daray Kaah!” Erayga magac-daridduna meelahaas oo kale ma galo, kumana habboona.
Kuwa loogu magac-daraye
Muuqa aan la kala garan
Heesaha macaan iyo
Muusiggiyo codkay diley!
Dhegaha aan ka maalee
Markii aan illaawoba
Wax i soo mir-kiciyoon
Maqlo waayi maayee;
Ma hayoo, mana sugaayoo
Maareeyoo sidee buu cishqigu
3. Afhayeen: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Afhayeen u hadlay dawlad hebla ama wasaarad hebla ayaa meel hebla arrinta caynkaas iyo caynkaas ah ka sheegay.” Taasina waa gef xagga afka ah oo bulshada dhexdeeda siduu ugu shaacay markaan u fiirsanno ay adag tahay inaynu iska saxno!
Ninka gaalka ag-joogee
Afhayeen la yidhaaho
Ninkaan wiil ka ilaashiyo
Ilma-adeer ku lahayn
Waa la iibsanayaaye
Haddaydaan naga eegin
Adinkaa axdigii iyo
4. Abwaan: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Gabaygaas aad maqasheen waxaa inoo marinaayey abwaan hebel-hebel.” Ama mid kale oo oranaaya: “Heestaas waxaa miraheeda tirshey abwaan hebel-hebel.” Waase ku-kakabise, eraygu meelahaas ma galo, kumana habboona.
5. Degaan: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Bacda lagu adeegtaayi deegaanka ayay u daran tahay.” Ama mid kale oo ku warramaaya: “Wasiirka deegaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dunidu si wadajir ah ay daryeelka deegaanka isaga xil-saarto.” Ama mid saddexaad oo ku soo wartebinaaya: “Waxaa deegaanka xeebta Ayl lagu haystaa markab dal hebel laga leeyahay oo la soo afduubay.”
Deegaan sideed kaaga dhereg doobka reeruhuye
Dar kaloo haween lihi wax badan kaa dukaansade e!
6. Baaq: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Hadal uu shalay meel fagaare ah ka jeediyey, waxa hebel oo madax ahi uu dadweynaha ugu baaqay inay nabadda ilaaliyaan.” Ama mid kale oo ku warramaaya: “Wasiirku wuxuu beerreyda gobol hebel ugu baaqay in xilliga soo aaddan ay waxsoosaarkooda kordhiyaan.” Waase ku-kakabise, baaqu halkaas oo kale kuma habboona, mana galo.
7. Tibaax: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Madaxweyne hebel ama Ra’iisulwasaare hebel oo la hadlaayey Golaha Wasaaradda ayaa tibaaxay inay dardar-geliyaan hawlaha u yaal.” Ama mid kale oo oranaaya: “Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobey waxa uu tibaaxay in dunidu si wadajir ah ay wax uga qabato kulaylka cimilada oo maalinba maalinta ka dambaysa ka soo daraya.” Maxay, haddaba, tibaaxi tahay?
8. Booqasho: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Guddoomiyaha baarlamaanka Iiraan ayaa maanta booqasho ku tegey dalka Masar.” Maalin kalena waxaan maqlay ku kale oo ku warramaaya: “Koox isugu jirta ururrada aan dawliga ahayn oo samafalka ka shaqeeya ayaa saaka waxay tagtay Ceelasha Biyaha; halkaas oo ay kooxdu ku booqatay kumaankun qof oo ka soo qaxay dagaallada Xamar ka socda.”
La igu beeree;
Waan kuu basaasee
Hadmaad i baanan?
Buur dheer i saartoo
Bugtaan ka qaadee;
Aan bogsadee i baano
Hay baal-marine i booqo.
9. Boqoole: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Hebel oo wafti ballaaran hoggaaminaaya ayaa shalay goor hore wuxuu u boqoolay gobol hebel.” Waxaase igala darraa weriye kale oo aan maqlay isaga oo ku warramaaya: “Madaxweyne hebel ayaa xalay fiidkii dal hebel u boqoolay!”
10. Qoomiyad: Waxaan maqlaa weriyeyaasha qaarkood oo ku warramaaya: “Nin u hadlay ururka magaciisu sidaas iyo sidaas yahay ayaa maanta waxa uu London ka sheegay in qoomiyadda Benaaddiriga si ulakac ah, iyaga gaar ahaan, loogu dulmay dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya ka qarxay bilawgii 1991kii.”
11. Qalanjo: Waxaan maqlaa hebla qalanjo, iyada oo lagu celcelinaayo oo hablaheenna qaarkood naanays looga dhigaayo ama riwaayad la dhigi doono lagu xayaysiinaayo oo inanta jilaysa magaceeda la inoogu soo bandhigaayo.
Qalanjada maroodiga ninkii waayo lagu qaybshey
Oo toban haruuboo qar jaran Eebbe kaga quudshey
Gujadiyo qaniinyada ninkii labadabuu quuray
Oo qaar-dambeedkiyo candhada feerka kaga qaaday
Oo caanuhuu qubay ilmadu qoysey baad noqone!
12. Faro-ku-tiris: Erayga faro-ku-tiris waxa ay Soomaalidu ku tilmaantaa wax ay tiradoodu kooban tahay oo haddii ay ugu bataan toban gaari kara, haddii kalena kaba yar. Waa wax markii la doono in la tiriyo aan la kala illoobi karin oo faraha gacmaha lagu kawkabin karo. Waxaad oran kartaa: “Hebel iyo hebli, in kastoo ay 3 sano isqabeen, haddana inta jeer ee ay meel ku kulmeeni waa faro-ku-tiris.” Ama waxaad oran kartaa: “Dagaalladii Soomaaliya ka dhacay qoys aan dhibaato ka soo gaarini waa faro-ku-tiris.”
Saa, keligey baan ahaaye, waan muusooday. Haddiibana waxaa igu soo dhacday macnaha erayga ‘faro-ku-tiris’ku in aannu weriyahaas ka dhaadhacsanayn, haddii uu dhab u aqoon lahaana aanu sidaas ugu sirmeen, gefka sidaas u weynna aanu ugu dhaceen. Waxaan la yaabay macnihii uu u dan lahaa sida uu u seegay oo aqoon la’aanta eraygu ay ugu horseedday macne kale oo halis ah, hubaalna ay tahay inaanu ahayn kii uu u jeedey!
Wuxuu u dan lahaa ninka geeriyoodey inuu ku tilmaamo nin-karmeed aad iyo aad uga muuqdey halgankii gobannimada ee dalkiisu uu madaxbannaanida ku taabay. Hase ahaatee, taas kuma uu guuleysan, isla markaasna wuxuu meel uga dhacay ummad-weyntii uu ninkaasi ka baxay, isaga oo ku tilmaamay halgankeedii gobannimada, tiro ahaan, intii ka qayb-gashay inay aad u koobnayd, inay faro-ku-tiris ahayd!
13. Dawlad iyo xukuumad: Waxaan maqlay weriyeyaasha midkood oo oranaaya: “Sarkaal sare oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka ayaa wuxuu waxqabad la’aan iyo fadhiidnimo ku eedeeyey dawladda Nuuri Al-Maaliki ee dalka Ciraaq.” Maalin kale ayaan haddana waxaan maqlay mid kale oo oranaaya: “Shalay ayaa waxaa Baydhaba shirkii ugu horreeyey ku yeeshay dawladda ra’iisul-wasaare Nuur-Cadde uu dhowaanta soo dhisay.” Labadan eray ee ‘dawlad’ iyo ‘xukuumad’ waxay ka mid yihiin erayada ay weriyeyaashu isku beddashaan ee, marar badan, ay isku sida ugu adeegtaan kolka ay wararka iyo warbixinnada tebinayaan; taas oo aan sax ahayn. Labaduba waxay ka soo jeedaan afka Carabiga, Guddiga Af-Soomaaliguna wuxuu sannadkii 1973kii go’aamiyey in iyaga la qaato marba, hidde ahaan, waxa ay tilmaamayaani haddii aysan ahayn hay’ado iyo fikrado ay bulshadeennu tiqiin oo ay magacna u lahayd.
14. Dawli iyo Caalami: Waxaa beryahaan laga hadlaayey heshiiskii 28kii Febraayo ee dhowaanta la dhex-dhigay xisbiyada dalka Keenya ee lagu kala magacaabo Bii.En.Yuu (PNU) iyo Oo.Dhii.Em (ODM), kuwaas oo ku eedoobey doorashadii Madaxtooyada ee dabayaaqadii sannadkii hore la qabtay. Maalmahaas bay ahayd markii aan maqlay wartebiye ku warramaaya: “Haddii uu heshiiskani hirgalo, waxaa hubaal ah inuu isbeddalaayo hannaanka dawliga ah ee ay Keenya ku soo socotey 40kii sano ee ugu dambeeyey.” Mar kalena waxaan maqlay weriye arrimaha Soomaaliya ka faalloonaya oo leh: “Dagaalkii sokeeye ee muddada dhawr-iyo-tobanka sano ah dalka ka socdey wuxuu baabbi’iyey dhammaan hay’adihii dawliga ahaa ee ay ummadda Soomaalidu lahayd.”
Ujeeddo ahaan, labada hadalba waa run oo muran kama taagna, waxaase gef ah erayga ‘dawli’ sida ay labada weriye ugu adeegteen, saa hay’ado dawli ah oo Keenya ama Soomaaliya ay leedahay ma jiraane, dal keligiis hay’ado dawli ah lihina ifka kuma abuurra.
Haddaba, dhibtu isaga ayay ka jirtaaye, macnaha erayga ‘dawli’ muxuu yahay?
15. Caalami: Erayga dawli waxaa la mid ah erayga caalami oo isaguna xagga Carabiga inaga soo galay, toddobaatannadii qarnigii horena afkeenna si rasmi ah loogu soo biiriyey. Waa eray aynu ku tilmaami karayno oo keliya waxyaalaha ‘dawliga’ lagu sheegi karo sida hay’adaha iyo ururrada ay hawlahoodu dunida inteeda badan ku wada baahsan yihiin. Hase ahaatee, marar badan ayaan maqlaa iyada oo siyaalo aan hagaagsanayn loo adeegsanaayo. Tusaale ahaan, mar baa waxaa dhegahayga ku soo dhacday iidheh idaacad Ef.Em (FM) ah laga baahinaayo oo lagu leeyahay: “Xaafad hebla waxaa laga furay makhaayad caalami ah oo magaceedu sidaas iyo sidaas yahay; taas oo aad ka heli karayso cunno kasta oo ay naftaadu jeclaato iyo shaqaale kuu jajaban intaba.”
16. Jaamacad iyo Kulliyad: Galab ayaan waxaan dhegeystey weriye idaacadda uu ka xoogsado Jabbuuti uga soo warramaaya. Wuxuu yiri: “Magaalada Jabbuuti waxaa maanta laga furay jaamacad cilmiga takhtarnimada laga barto.” Marar kale oo badanna waxaan maqlaa iyada oo la isugu warramaayo: “Hebel ama hebli sannad hebel ayay jaamacadda Lafoole ka qalin-jebisey!”
17. Hawl iyo Shaqo: Waxaan maqlay weriyeyaasha qaarkood oo oranaaya: “Hebel oo dal hebel ku maqnaa ayaa maanta ka soo noqday; isaga oo muddo bil ah halkaas hawlo shaqo ugu maqnaa!” Maalin kalena waxaan maqlay wartebiye Xamar ka soo hadlaaya, kana warramaaya hoogga iyo ba’a ay weriyeyaashu Soomaaliya ku qabaan. Markaas buu yiri: “Toddobaadkii aynu soo dhaafnay oo keliya waxaa Xamar lagu diley 3 weriye; iyaga oo hawlahoodii shaqo gudanaaya.”
Qaamuus ahaan, hawli waa shaqo, shaqona waa hawl. Sidaas awgeedna, mid keliya ayaa kugu filan, haddii aad wax qoraysid ama qalabka warfaafintaba aad wax ka baahinaysid.
Dulucdeedu waxay tahay: Laba magac oo, iyada oo aan wax kale loo dhexaysiinnin, la israaciyaa waxba ujeeddooyinka hadalka kuma kordhiyaan.
18. Subax wanaagsan, habeen wanaagsan…: Beryahaan dambe waxaynu maqalnaa weriyeyaasha qaarkood oo, haddaynu nahay daawatada ama dhegeysteyaasha, kolkay ina bariidinayaan oranaaya: “Dhegeysteyaal, ‘subaxnimo wanaagsan’ ama ‘galabnimo wanaagsan’ ama ‘fiidnimo wanaagsan’ ama ‘maalinnimo wanaagsan’ ama ‘habeennimo wanaagsan’” iyo qaar kale oo la too ah?
Isla ninkaas socotada ahi kolkuu waabberigii ku soo baxo reero kale oo xoolihii ay weli u xeraysan yihiin oo markaas haruubbada u qaatay amaba kala soo baxay waxa uu ku nabdaadin jirey: “War maxaad ku barideen?” ama “Maxaa lagu beryey?” ama “Ciddu maxay ku bariday?” Odayga reerka ama ragga waaweyn ee uu dhalay midkood ayaa markaasna ku jawaabi jirey: “Nabad baannu ku barinnay. Alxamdulillaah. Wax soo aaddan Allaa og. Wax weyddiin ogaal. Warkayaa inta le’eg. Waa sidee, adigu maxaad sheegtay?”
Mararka qaarkood haddii ninkaas reerka lihi uu dayrsanaayo ee uu gocanaayo dareen dhowaan qoladooda la soo gudboonaadey (sida rag laga laayey, xoolo laga mooradduugey, dumar laga boojiyey, iyo wixi lamid ah), nabdaadinta ah ‘maxaad ku barideen?’ wuxuu kaga jawaabi jirey: “La soo kaakac. Nin iyo waagii. Madaxa la qaad! Aadane mooyee, Eebbe wax ka sheegan mayno! Ninkeed-dhibi ma yara” iyo erayo la mid ah oo midka socotada ahi uu ka garan jirey dhacdo aan la mahadini inay reeraha ku cusub tahay.
Xilligaas ayay dhallinyaradaasi waxay Soomaalidii reer-magaalka ahayd ka reebeen ku-adeegsiga isnabdaadintii afafka shisheeyaha uga timid, dhowaantana ay qaayibeen. Waa xilligii ay soo saareen weedhaha ay ka midka yihiin: ‘Subax wanaagsan’, ‘galab wanaagsan’, ‘habeen wanaagsan’ iyo ‘maalin wanaagsan’, kuwaas oo haddiiba bulshada dhexdeeda ka hirgalaya, lagagana maarmay: Good morning, Good afternoon, Good night, Buon giorno, Buona sera, Buon pomeriggio iyo weedhaha qalaad ee la midka ah.
Sida, haddaba, inoo wada cad, isnabdaadintan cusubi waxay mid waliba ka kooban tahay laba eray oo qura. Erayga hore waa magac sida subax, galab, habeen iyo maalin. Midka labaadna waa tilmaan oo waa ‘wanaagsan’; kaas oo magac walba gadaal ka raaca.
19. Oddoros: Saraakiisha Jamciyadda Quruumaha ayaa markii ay muddo joogaanba ka soo dega garoonka Nambar-50, si ay u oddorasaan habka ay kaalmadu dadka u baahan ay u gaareyso.
20. Qardajeex: Mar dhawr bilood haatan laga joogo ayaa meel Boosaaso u dhow waxaa lagu af-duubay weriye Faransiis ah oo hay’addii warfaafineed ee uu u shaqaynaayey xagga masawir-qaadidda ugu qaybsanaa. Wuxuu doonaayey, isaga oo maamulka dhulka Bunt aan ogeysiin inuu gaaro xeebta Mareero la yiraahdo, halkaasna uu kala soo laabto masawirro uu ka soo qaado dadka Yaman doolka ugu sodcaala ee doonyaha halakaysan inta laga ijaaro badda tarabtarabta ugu le’da. Masawirradaasi waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey oo dadkaas geerida u bareeray ay dunidu abid ka aragto, weriyuhuna, hadday u suuraggasho, intay magac dheeriyi ka raacdo ayuu haddana ku dallici lahaa!
22. Kaalin libaax leh:
B. Erayo shisheeye oo aan baahi loo qabin, kuwa Soomaaliyeed maxaa lagu nacayaa?
Soomaaalidu, sidaynu wada og nahay, waa ummad wax-akhriska iyo qoraalkuba ay ku cusub yihiin. Sidaas darteed, waa ummad idaacadaha aad u dhegeysata oo jecel waxa dunida ka dhacaaya inay ku maqasho afka ay garanayso oo keeda ah. Markaan anigu hanaqaaday, dhallinyaro iyo waayeelba, wararka uu weriyuhu tebinaayo ka sokow, af-Soomaaliga uu ku hadlaayo ayaa loo fiirsan jirey.
1. dayax-gacmeed (satellite)
2. Qarammada Midoobey (United Nations)
3. hantiwadaag (socialism)
4. horumar (progress)
5. hubka halista ah (nuclear weapons)
6. hubka iswada (automatic weapons)
7. hirarka gaaggaaban (short waves)
8. hirarka dheerdheer (long waves)
9. hirka dhexe (medium wave)
10. biyo-dhaca Fiktooriya (Victoria Falls)
11. barwaaqo-sooran (commonwealth).
12. geeddi-socodka nabadda (peace process)
13. Buuraleyda Juulaan (Golan Heights)
14. maan-dooriyeyaal (drugs)
15. gacan-ka-hadal (violence)
… iyo qaar kale oo dharaar noolba aynu ka maqalno idaacadaha Af-Soomaaliga ku
Arartayda iyo ulajeeddada ka dambaysaaba waxaad mooddaa in ay u eg tahay maahmaahdii ahayd: ‘Wadaad maqan ammaantii, waa wadaad jooga caydii!’
Waana loo qaadan karaa. Runtii, weriyeyaasha da’dii hore waxaa i xusuusiyey dhallinyarada dhowaanta warfaafinta ku soo biirtay oo qaar ka mid ah aan ku darraabaayo sida ay uga liitaan af-Soomaaliga tayada sare leh ee idaacadaha u qalma iyo, isla markaas, sida ay u moog yihiin, af-Soomaaliguna, tabta afafka kale, inuu barasho uga baahan yahay.
1. Gefaf erayada afka qaarkood ku saabsan,
2. Kuwo xagga naxwihiisa la xiriira, iyo
3. Erayo afaf shisheeye ka soo jeeda oo dhiggooda afkeenna laga heli karo, sidaas darteedna aan adeegsigooda baahi loo qabin,
4. Tarjamad xarfi ah iyo wax-curis la’aan: Oraah inta warbaahiyeyaasha midkood inta maalin laga maqlay looga wada dayday; iyada oo aan afka laga waayin si kale oo loo yiraahdo.
1. Suxufi: Bartamihii 1900 iyo sagaashannadii ayuu eraygani si kediso ah dhinac walba inooga soo galay. Hoteel Suxufi! Suxufi Xamar jooga! Suxufi ‘wargeys hebel’ ka tirsan! Hebel ayaa meel hebla suxufiyiin kula hadlay! Cidina isma weyddiin: eraygu halka uu ka soo jeedo iyo mid u dhigma in aynu leennahay iyo in kale. Waa lagu qamaamay, laguna kawkabay sidii ari wax badan biyo ka qatanaa oo kaalinkii ceelka iyo isaga la isaga dhex-baxay!
2. Muhaajiriin: 10kii sano ee u dambaysey waxaa soo kordhaayey dunida saddexaad dadka ka tirsan ee sida qarsoodiga ah Yurub ugu soo qulqulaaya.
Sida la malayn karo, sababuhu waxay u badan yihiin dagaallo sokeeye oo ay ka baxsanaayaan ama dandarro xagga dhaqaalaha ah oo ay u joogi kari waayeen.
Qulqulkaasi mar walba ma tabaalo la’a, waxaana badaha ku baabba’a dad faro badan oo inta lacag laga qaatay doonyo aan hagaagsanayn laga soo buuxiyey.
Libaax dalandoolay duur ma ceshee
Digaay dalku waysku yaallaa.
3. Bareejo: Barnaamijyada cayaaraha oo lagu soo qaato tartanka kooxaha kala duwan dhex-mara waxaynu ku maqalnaa weriye meel wax ka soo tebinaaya oo leh, “Koox hebla iyo koox hebla cayaar kubbadda cagta ah oo magaalo hebla ku dhex-martay waxay ku dhammaatay bareejo; mid walibana 2 gool ayay dhalisay.” Waa eray af-Talyaani laga soo qaatay ‘pareggio’ oo aan weriyaha Soomaaliyeed baahi u qabin, maxaa yeelay waxa uu haystaa erayo u dhigma oo sal adag afkiisa ku leh.
4. Mistar Guuleed ama Mistar Faarax: Gobannimada ka hor Soomaalidu ma lahayn talis dhexe oo dalka ka wada taliya. Ma aynu lahayn boqorro ciidammo leh oo laga baqo, amarkoodana lagu wada qasbanaa. Wiilwaal iyo qaar kale oo tiro yar markii laga reebo, boqorrada, garaaddada iyo ugaasyada Soomaalidu ma lahayn awoodda wax-muquuninta ee kuwa dhiggooda ahi ay dunida kale ku lahaayeen.
5. Tirada telefoonka: Ma aqaan in la ila dareemay iyo in kale, waxaanse la yaabaa Soomaalida xilliyadan oo, yar iyo weynba, tirada telefoonka af-Ingiriis isugu sheegta. Tusaale ahaan, qof baad ku leedahay, “Telefoonkaaga ama midka hebel ii yeeri,” markaas buu inta kuu bilaabo ku oranayaa, “Qoro: eight, nine, three, five, four, six…” ilaa uu dhammeeyo! Maxaa loo qaadan karaa?
1. Magaca oo gadaal laga raaciyo -o sida oday iyo odayo ama nirig iyo nirgo;
2. Magaca oo gadaal laga raaciyo -yaal sida tuke iyo tukeyaal ama dubbe iyo dubbeyaal ama aabbe iyo aabbeyaal;
3. Magaca oo gadaal laga raaciyo -yo sida gabay iyo gabayo ama mindi iyo mindiyo;
4. Magaca oo gadaal laga raaciyo -oyin sida waddo iyo waddooyin ama hooyo iyo hooyooyin;
5. Eedaymo: Erayga eed waxa uu ka mid yahay kuwo uu warfidiyeenka cusubi ku turunturroodo, gaar ahaan marka uu doono inuu wadareeyo. Waa magac dheddig oo hal-alanle ah (one-syllable word), isaga oo kalena waxa uu ku kooxoobaa ama uu wadar ku noqdaa marka gadaal laga raaciyo shaqalka -o.
Weligaa dumaal kaa fog baad duub u xidhataaye
Dadkuna haatan waa yaabban yahay daqaqankaagiiye
Danina kuuma geynnine adaa doonta eedaha1 e.
5. Qalalaasooyin, dhimashooyin iyo dilal: Saddexduba waa erayo aynu dharaar walba idaacadaha ka maqalno, lana yaabno. Naxwe ahaan, magaca af-Soomaaligu mar waa lab, marna waa dheddig, mar waa keli, marna waa koox, mar waa caadyaal, marna waa cillanaad, mar waa gaar, marna waa mid guud.
6. Dalka Ruushku waxay sheegeen: Falku (verb) wuxuu tilmaan inaga siiyaa yeelaha (subject); xagga tiradiisa iyo xagga cayntiisa labadaba. Falka ayaa laga gartaa hadduu yeeluhu keli yahay iyo hadduu koox yahay. Sidoo kale, isaga ayaynu ka ogaan karnaa haddii uu dheddig yahay iyo haddii uu lab yahayba.
7. Laba qof (-ood): Waayadan gefaf-naxweedka af-Soomaaliga dhexdiisa caanka ku noqday waxaa ka mid ah wadaraynta erayga qof; taas oo ka soo horjeedda xeer la yaqaan, kuna saabsan hababka kooxaynta magcyada oo si fudud la isaga dhaadhicin karo. Magacu haddii uu dheddig yahay oo tiro laga horraysiiyo waxa uu wadar noqdaa markii (-ood) gadaal laga raaciyo sida;
1. kab (-ta): 4 kabood
2. doc (-da) : 3 docood
3. mag (-ta): 10 magood
4. seef (-ta): 50 seefood
5. beer (-ta): 15 beerood
6. meel (-sha): 11 meelood
7. beel (-sha): 12 beelood
8. xeeb (-ta): 60 xeebood
1. bog (-a): 2 bog
2. tol (-ka): 3 tol
3. kol (-ka): 4 kol
4. col (-ka): 5 col
5. hog (-a): 6 hog
6. qol (-ka): 7 qol
7. god (-ka): 8 god
8. qof (-ka): 9 qof
9. qod (-ka): 10 qod
10. reer (-ka): 11 reer
11. tog (-a): 12 tog.
1. Waa inuu garawsadaa af-Soomaaligu, intiisa badan, inuu ka soo jeedo bulsho reer-miyi ah oo xoolo-raacato ah, hiddaheeda iyo afkeeduna ay isku xiran yihiin.
2. Waa inuu barasho joogto ah ugu jiraa taariikhda dhaqanka bulshada iyo macnaha erayada furaha u ah.
3. In kastoo aanu weli dhab u kala miirmin, haddana waa inuu aqoonsadaa inay jiraan af rasmi ah oo qoraalka iyo warbaahinta ku wanaagsan iyo ‘af suuq’ in xaafadaha lagaga hadlo mooyaane, aan idaacadaha iyo wargeysyada ku habboonayn. Afkaas rasmiga ahi wuu abuurmay, maantana wuu jiraa oo waa midka aynu haddaba wax ku qorno. Gefafba ha ka buuxeene, waa afka aynu ku aragno warbaahinta qoran iyo midda layska arko, isla markaasna aynu ka maqalno idaacadaha af-Soomaaliga wax inoogu soo tebiya.
4. Inta aanu adeegsan waa inuu u dhabbe-galaa abtirsiimada erayada (etymology) iyo kuwa uu isku beddalan karo ee isku sida uu u adeegsan karo (synonymous).
5. Si uu carrabkiisa u soofeeyo, adeegsiga erayada habboonna uu ugu carbiyo, weriyuhu waa inuu ku dedaalaa macaansiga dhaxalka suugaaneed ee ummadda oo weliba uu kor ka qaybaa maansadii hore ee Soomaalida inta ugu badan ee uu kari karo.
6. Waa inuu bartaa naxwaha af-Soomaaliga oo, shisheeyeba ha u badnaadee, wax badan laga qoray laga soo bilaabo 1903dii ilaa 1999kii.
7. Sidoo kale, waa inuu wax badan ka ogaadaa eraybixintii afka ku soo korodhay tan iyo intii la qoray (1972) ilaa tii lagu soo saaray shirkii eraybixinta af-Soomaaliga ee Jabbuuti ka dhacay sannadkan (Maarso – Mey 2002da).
8. Ugu dambaysta, waxaan ku talin lahaa hay’adaha ama idaacadaha kala duwan ee wararkooda af-Soomaaliga ku baahiyaa inay daryeelka afka qaybtooda ka qaataan oo, markii muddo la joogoba, ay abaabulaan aqoon-isweydaarsi weriyeyaasha u shaqeeyaa ay ku kulmaan; wixii gefaf loo arkona lagu hagaajiyo 2. Birmingham (England); Nofembar, 2002 idaajaa21@hotmail.com
1. B. W. Andrzejewski iyo I. M. Lewis (1964): Somali Poetry, Oxford University Press, London.
2. Yaasiin C. Keenadiid (1984): Qaamuuska Af-Soomaaliga, Firenze: E. Ariani/L’arte della stampa.
3. Shire Jaamac Axmed (1976): Naxwaha Af-Soomaaliga, Muqdisho, Akademiyada Dhaqanka.
4. Cabdalla Cumar Mansuur iyo Anariita Bugliyelli: Barashada Naxwaha Af-Soomaaliga, HAAN Associates Publishing, London 1999.